FANAPOAHANA VATO BNGRC
Afa-doza ny mponin’i Tsarafaritra Tsimbazaza, satria tontosa androany ny fanapoahana ilay vato be milanja 500T nahiana nihotsaka eny amin’ny fokontany Tsarafaritra Andoharano Tsimbazaza. Nanano sarotra ny asa fanapoahana, raha ny nambaran’ireo teknisiana teny an-toerana. Na izany aza anefa, tsy nisy ny aina nafoy, na ny naratra, tsy nisy ihany koa ireo trano voakasika nandritry ny fanapoahana.
Ora 7 teo ny fotoana naharetan’ny fanomanana sy ny fametrahana ireo fitaovana hanapoahana ny vato, nataon’ny avy eo anivon’ny Sapeurs Pompiers, ny tafika Malagasy, sy ireo mpamaky vato. Noesorina tamin’ny tranony avokoa ireo izay rehetra mbola nonina teny an-toerana ankoatra ireo toka-trano 16 izay efa nalàna tamin’ny tranony iray volana lasa izay.
Tao anatin’ny 32 taona no efa niaina tao anatin’ny tahotra ireo mponina izay manodidina ity vato be ity, raha ny nambaran’izy ireo. Faly ary velom-pisaorana ireo mponina tamin’izao fahatontonsan’ny fanapoahana ny vato izao.
Nanano sarotra ny asa fanapoahana, noho ireo trano maro manodidina azy na izany aza, voaharo avokoa ny ain’ireo olona ary tsy nisy ihany koa ny fananana simba.
Haharitra eo amin’ny 1 volana eo ny fanalana tanteraka ireo vato niparitaka ireo, araka ny fanazavana. Efa afaka miverina amin’ny trano foneneny kosa ireo fianakaviana voatery nafindra monina satria efa efaka ny loza. Hojerena manaraka izao ihany koa, ireo vato izay mety ahiana hiotsaka any amin’ny faritra manodidina an’Ambaninampahamarinana, Tsimbazaza sy ny maro hafa, rah any nambaran’ny BNGRC hatrany.